Toban Sababood Oo Uu Raila Odinga Uga Baxay Tartanka Doorashada Kenya? | Somaliland Today
← Hoggaamiyaha Gobolka Catalonia Oo Soo Dhoweeyey Madaxbanaanida
Nin Soomaali Ah Oo Lagu Eedeeyay In Uu Jidh-dilay Dad Tahriibayaal Ah Oo Xabsi Daa’in Lagu Xukumay →
Toban Sababood Oo Uu Raila Odinga Uga Baxay Tartanka Doorashada Kenya?
(SLT-Nairobi)-Is beheysiga mucaaradka Kenya ee loo yaqaano NASA ayaa sheegay in uu ka haray doorashada la filayo in la qabto 26-ka bishan.
“Dalabka xuriyad labaad”
“Markii ay tirinta codadka billaabatay waxaa la qalday natiijada. Wax kastoo qalad ah, waa qalad,” ayey ku sheegeen qoraal ay soo saareen.
Ku dhowaad bil ka dib markii natiijadii doorashadii hore la laalay “dalka wuxuu lugaha la galay dhoobo,” ayuu yiri Rali Odinga oo warbaahinta la hadlay.
Wuxuu qiray in “arrintaas ay fileyeen”.
“Waxa aynaan filaneyn waa in hoggaanka dalka uu ku kala qeybsano mabaadii’da aasaasiga ah ee dimuquraadiyadda oo ah doorasho xor iyo xalaal ah,” ayuu yiri hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya.
“Anagoo ah NASA, waxaan go’aansanay in doorashada ku celiska ah loo qabto sida ay amartay maxkamadda ugu sareysa,” ayuu yiri Raila Odinga.
“Waxaa gudbinay diiwaan ay ku qoran yihiin dalabaad aan ka noqosho lahayn, lagana gorgortami karin, oo ah in la raaco isbedel lagu xaqiijinayo doorashada,” ayuu yiri Odinga, hoggaamiyaha mucaaradka Kenya.
Qoraal uu Raila u aqriyay warbaahinta wuxuu ku xusay in ansixinta dalabkooda ah in “doorasho xor iyo xalaal” ah la qabto, aysan ka hor imaanin IEBC, Jubilee iyo korjoogtada caalamiga ah.
Korjoogtada midowga Yurub waxay soo jeediyeen arrimo taageeraya “dalabkeena aanan ka noqoshada lahayn,” ayay sheegeen NASA.
“Arrinta sii wadidda hannaanka qabashada doorashada ku celiska ah ee 26-ka Oktobar, ayadoo aan la fulin dalabkeena, waa caqabadda waqtigan,” ayuu tilmaamay Mr Odinga.
“Dooda ma ahan u hogaansamidda amarka maxkamadda, ama ku xadgudbidda kalsoonida shacabka. Muhiimadda waa in aan ka wada shaqeyno sidii loo xoojin lahaa qiyamka qaranka iyo aasaaska hannaanka doorasho sax ah”.
Raila Odinga ayaa sheegay in guddiga doorashada ee IEBC ay si ula kac ah u diideen fulinta isbedellada muhiimka u ah doorashada 26-ka bishan iyo in ay noqoto “mid xor iyo xalaal ah”.
“Waqti muhiim ah ayay ku lumiyeen xayaysiimo ayagoo aan go’aansan qaadidda dhaqdhaqaaq muhiim ah,” ayaa lagu qoray warka NASA ay soo saartay.
Isbeheysiga mucaaradka Kenya ayaa qabo walaac ah in doorashada soo socota lagu shuban doono, “kana xumaan doonto kuwii hore”.
“Waa in aysan dhcin qaladaad la mid ah kuwii 2008-dii,” ayuu xusay Raila.
“Waxa muuqato in doorashada 26-ka bishan ay ka xumaan doonto middii hore,” ayuu yiri hoggaamiyaha NASA.
Mucaaradka ayaa cuskaday arrintaas oo ay ku tilmaameen in “jubilee aysan diyaar u ahayn tartan loo siman yahay.”
“Waxaan ku guuleysanay dagaalka axsaabta badan iyo dimuquraadiyadda. Waana ku guuleysan doonnaa dagaalka aan ugu jirno doorasho xor iyo xalaal ah”, ayuu sheegay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya, Raila Odinga.
“Ka dib markii aan eegnay kaalinteeda doorashada soo socota iyo danaha shacabka Kenya, gobolka iyo guud ahaan caalamka, waxaan go’aansanay in aan ka harno tartanka xilka madaxweynaha”, ayaa lagu qoray warka uu Raila soo saaray.
Waxay sheegeen in go’aankooda ay ku saleeyeen dastuurka iyo xuquuqdooda aasaasiga ah ee sharciga Kenya.
“In aan ka harno tartanka doorashada wuxuu dan u yahay dalka. Qof kastana guul ayey u tahay,” ayuu yiri Mr Odinga.